अक्टोबर 2010 – Pramb's Weblog
मेरो बाइसौँ जन्मदिन मनाउन भृकुटिमण्डपको ‘हलुवा बर्गर’मा म भन्दा पहिलै बिशाल र उसकी प्रेमिका स्टीलको प्लेटमा चिजबलको पहाड बनाएर बसेका थिए । चिजबल मेरो बेस्ट भएको उनीहरुलाई थाहा थियो । बिशाल त्यो बेला पनि एकमहिने लिभमा नेपाल आएको थियो । त्यो दिन हामीले खुब रमाइलो गर्यौ । पछि बिशाल र विपश्वी (उसकी प्रेमिका र मेरी साथी)ले मलाई ‘ह्याप्पी बर्थ डे बिनी’ कुँदिएको हरियो टिस्रट गिफ्ट गरे । यी शब्द लेखिरहँदा पनि मैले आफ्नो आंग त्यही टिस्रटले ढाकेको छु। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
Posted in monologue	| Tagged attraction,friendship,love,marriage,relation |4टिप्पणीहरु
अक्टोबर 18, 2010 by PRAMB
सानो छँदा, मामाघरको दसैँ
दसैँमा 'गून्यू चोलो' दिँदा.....:)
त्यो बालापनको सम्झना जो हरदम रम्छ मनमा
त्यो मिठो मधुर मुस्कान आहा चचल बचपन
जो बितिसक्यो छुटिसक्यो एकपटक छाउने बचपन
फेरी कहिल्यै नआउने बालापन बाकिँ छ एउटै बचपनको याद
नसक्छ भुल्न भुलाउन बीच बचपन हजुरआमाको साथ
दशैँ आयो र अब झन्डै झन्डै गयो पनि । दशैँभरी घरमा ‘भाँडा मझुवा’को काम अझै जारी छ । यसपाला मामाघर गइएन । घरबाट कतै निस्किएन पनि । बच्चा बेलाको रमाईलो सम्झिँदा लाग्छ त्यो रमाईलो अब कहिल्यै आउँदैन । खै त्यो मामाघरको रौनक ? खै बाराही थान जाने हुटहुटी ? अनि खै िपंग खेल्ने रहर ?
मामाघरको त्यो सान । बुवाको ‘आरएक्स’ बाइकमा अगाडी बसेर मामाघर जानुको मज्जा कम हुँदैन थियो । टिकाको दिन या भोलिपल्ट म बुवा भन्दा अगाडी बसेर बाईकका् ह्यान्डल समाउँथे । लाग्थ्यो, काठमाडौंको गोठाटार देखि भक्तपुरको बागेश्वरी सम्म बाटामा हिँडेने मान्छेले मलाई नै हेरीरहेका हुन्छन् ।
मोटरसाइकल मामाघरसम्म पुग्दैन थियो । सात मिनेट जति ओरालो झरेपछि आउने लंगडा मामाको पसलमा बुवाको बाइक राखेर हामी मामाघर जान्थ्यौँ, अध्यारोमा छामछामछुमछुम गर्दै । मोटरसाईकलमा बुवा र ममि मात्रै जाँदा भने म दिदीसँग बसमा जान्थेँ । त्यसो गर्दा बसबाट झरेर मामाघरसम्म पुग्न एकघन्टा उकालो उक्लिनु पथ्र्यो । मनपोखरीदेखि मामाघरसम्मको हिँडाईको रमाइलो कम्ती हुँदैनथियो । धेरैजसो हाम्रै मामाघर जाने आफन्त भेटिन्थे । छोरी धेरै भएको मामाघरमा पाहुना निस्फिकि्र हुन्थे ।
हामी उही उमेर हाराहारीका भुर्राहरुको माझमा म अलि गमक्क परेर बस्थेँ । प्राय सधैँ मामाघर जाँदा सानो मामाको भैँसी बिरामी हुन्थ्यो । ममि, सानीमाहरु पीर गरिरहने । त्यसको हामी भुरालाई बाल मतलब ।
दसैँमा प्राय सधैँ अध्यारोमा पुगिन्थ्यो मामाघर । हजुरआमाको त्यो फराकिलो पिँडीमा टिका लगाउन गएकाहरु फैलिएर बस्थे । ९५ कटिसक्नु भएको हजुरबा दिउँसो त राम्रो सँग मान्छे चिन्नु हुदैँन थियो । राति टिका लगाइदिने कुरै भएन । टिकाको दिन राती मामाघर बस्ने छोरी चेली भान्जा भान्जी मात्रै ५० जना भन्दा बढी हुन्थे । तर मामाघरमा पाहुना जति भएपनि हजुरआमा हुँदा सम्म छोरी र भान्जीहरुको खुट्टामा माइजुहरुले तेल लगाइदिने चलन थियो ।
तलातला भएको आँटीमा बसेर हामी ठूलो कसौँडीमा भात पकाएको हेरिरहन्थ्यौं । मलाई ठूलो दियो घरमा साँझको बत्ति बालेको असाध्यै मनपथ्र्यो । धुपौरोमा ध्यू र कपूर हालेर बाहिर सम्म घन्टी बजाउँदै मामाको छोरी तुलसीको मोठ सम्म आइपुग्दा रहर लाग्थ्यो । त्यही सिको गरेर मैले पनि घरमा रहर नपुगुन्जेल साँझको बत्ति त्यसैगरी बालेको थिएँ ।
हजुरआमा मामाघरमा धेरै जसो दही चिउरा केरा दिनुहुन्थ्यो । मलाई हजुरआमाको दाहिने आँखा अमिताब बच्चनको देब्रे आँखा जस्तै लाग्थ्यो । बिचरी हजुरआमालाई अमिताब बच्चन भनेको को हो के थाहा ।
कुरा गर्दा नाकको देबॆ पोरामा देब्रे हातकै चोर औँला राखेर कुरा गर्ने हजुरआमाको बानी हामी सबैलाई मनपथ्र्यो । म सानीमाहरु घर आउनु भएको बेला हजुरआमालाई जिस्काउँथे पनि हजुरआमाकै पारामा ‘हुई बाबु’ भनेर । हजुरआमाले सबैभन्दा मन पराएको ज्वाईँ मेरो बुवा । बागेश्वरीमा धेरैले बुवालाई चिन्थे ‘दाहाल भिनाजु’ भनेर । कसैले म जाडो बिदामा गएको बेला दाहाल भिनाजुको कान्छी छोरी भनेर चिनाईदिँदा आफ्नो सान नै अर्को हुन्थ्यो ।
अँ साँच्चै बच्चा हुँदा मामाघरको दसैँमा रमाइलो हुन्थ्यो, भोलिको उज्यालो कहिले हुन्छ र हामी भूराले आफ्ना आफ्ना लुगा एकअर्कामा देखाउने । राम्रो लूगाको कम्पिटिसनमा सधैँ मैले नै जितेँ की जस्तो लाग्थ्यो ।
सधैँजस्तो मामाघर भरीमा मेरो दसँैको नयाँ लुगा अरुको भन्दा विशेष हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो मलाई (सबै केटाकेटीलाई सायद त्यसतै लाग्छ की खोइ) ।
हजुरबुवा लगभग सय मिटर लामो पिँडीको बीचको खाटमा बस्नुहुन्थ्यो । खाटमा अटाउने अरु चार पाँचजना जति ज्वाईँहरु बस्न पाउँथे । भुराहरुलाई प्राय जस्तो पीडीमा सुकुलमाथि । म बुवाको काखमा लुसुक्क बसिसक्थेँ । बुवाहरुलाई चिया आउँदा मलाई पनि सँगै आउँथ्यो ।
बेलुकी खानापछि भाँडा माझ्ने बेलामा धारोमा खेल्न मलाई मज्जा लाग्थ्यो । खरानीले माझिने भाँडाको चमक अहिलेको पि्रलले धोए भन्दा ज्यादा चहकिलो हुन्थ्यो ।
भोलि बिहान फराकिलो आँगनमा हलुवावेदको फेदमा हामी सबै टिका लगाउन फिजारिएर बस्थ्यौँ । जिउभरी दाद आएको हजुरबाको शरिरबाट सदाबहार घ्यूको गन्द आउँथ्यो । हजुरआमाले टिकाको थाली नजिकै राखिदिएपछि हजुरबा ठूला मान्छेदेखि टिका लगाउन सुरु गर्नु हुन्थ्यो ।
‘को बाबु’ टिका लगाइदिनेको निधार नचिनेपछि हजुरबा हजुरआमालाई सोध्नुहुन्थ्यो । ‘ए, माइली को हुन् यिनी ?’ भनेर हजुरआमाले फलानो भनेपछि सम्बन्धित ठाउँको बुढापाकाको हालखबर सोध्नुहुन्थ्यो । अनि फेरी एकछिन पछि नजिकै त्यही मान्छे गयो भने ‘को बाबु तिमी ?’ भन्नु हुन्थ्यो । म हजुरबालाई जिस्काउन बेलाबेला नजिक गइरहन्थे । सानीकान्छी की छोरी भनेपछि ए भन्नु हुन्थ्यो । अनि फेरी उही पारा । हामी भुर्राहरु हजुरबाको मान्छे बिसर्िरहने बानीमा आफू आफू जिस्काएर हास्थ्यौँ ।
टिका लगाइसकेपछि खाना खाएर म मामाघरको धारोमा खेलिरहन्थे । घरमा पानीको साह्रै अभाव भएकोले मलाई हाम्रो घरको पनि आँगनमै धारो भइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने खुबै रहर लाग्थ्यो । ठूलो मामाको घरको आँगनमै जोडिएको धारामा म घरिघरि मुख धुने, हातगोडा ढुंगामा राखेर धुने गरिरहन्थेँ । मामाहरु जिस्काएर मलाई ‘यसपालि मंसिरमा भान्जीलाई एउटा भान्जी ज्वाईँ खोजेर खुट्टाको पानी खानुपर्छ’ भन्नुहन्थ्यो । मलाई बिहे गरिदिने भन्ने कुरा सुनेर रमाइलो लाग्थ्यो ।
हजुरबा, हजुरआमा, मामा, माइजुले टिका लगाएर पैसा दिएपछि टन्न खल्ती बोकेर हामी त्यो सानो घन्टी फूलको बार हुँदै मामाघरको ओरालो झथ्र्यौँ । म मनमनै आशा गथेँ जाडो विदामा पन्ध्र दिन बस्ने गरी मामाघर आउँछु ।
जाडो बिदामा मामाघर जानुको मज्जा बेग्लै । हजुरआमासँग मामाघरको पछाडी पट्टि गहिरोमा पर्नेे नेवारको ठूलो धारोमा लुगा धुन जाँदा मलाई धेरै जस्तो सुन्तला दिनुहुन्थ्यो । हजुरआमाको ‘ब्रेन ट्युमर’ भएपछि देब्रे हात नाडी भन्दा तल राम्रो सँग चल्दैन थियो । म हजुरआमालाई लुगा धुन सघाउँथे । लुगा धोइसकेपछि हजुरआमाले सधैँ अमला साबुनले नुहाइदिनु हुन्थ्यो । मैले त्यो साबुन हजुरआमाले बाहेक आजसम्म कसैले प्रयोग गरेको देखेको छैन ।
तर अब अहिलेको दसैँ ।
के रमाइलो छ खै यो दसैँको ।
ठूलोमामाहरु तल भक्तपुर झर्नु भयो । सानोमामा माथि गाउँमै भएपनि हजुरबा हजुरआमा हुँदाको जस्तो कुनै रमाइलो छैन । हजुरबाले एउटा सानो झार उमि्रन नदिने आँगनभरी घाँस भरिएको छ । त्यति ठूलो घर आँगनमा जम्मा बस्ने मानिस सानोमामा र माईजु । के भ्याएर र सकेर गर्नु । पोहोर साल जाँदा रमाइलै लागेको थियो ।
हजुरबा, हजुरआमा, त्यो बालापनको मामाघरको रौनक खुबै मिस भयो । हजुरआमा त्यही सनुँस भएको कोठाबाट दहीचिउरा खुवाउन केरा झिकेर आउनुहुन्छ की जस्तो लाग्यो । हजुरबा त्यही सुन्तलाको बोटमुनिको घाँस गोडिरहनु भएको छ कि जस्तो लाग्यो । तर फगत त्यो सूदुर स्मिृतिका रमाइला हुन् ।
सानो मामाको घर अगाडीको हलवेदको रौनक हराए जस्तै मामाघरको रौनक पनि बिस्तारै मधुरो हुँदै गएको छ । हजुरबा हजुरआमा नहुँदा पनि मामा माइजुको मायामा कुनै कमी आएको होइन । तर पनि मामाघर जाने हुटहुटि अहिले छैन । सायद उमेर सँगै रमाइलो गर्ने परिवेश फेरियो ।
तर मेरो प्यारो बागेश्वरीको मामाघर मेरी असल हजुरआमा सम्झिँदा मलाई त्यही सूदुर अतीत याद आइरहेको छ । आँखाभरी ती अप्ठ्यारा मामाघर जाने खोल्साखोल्सी याद आइरहेछ । मन त्यसै त्यसै चाचल भएर हजुरआमाको काखमा लुटुपुटुलुटु गर्न खोज्दै छ ।
Posted in नागरिक घुमफिर	| टिप्पणी छोड्नुहोस्